University of Tsukuba - Ọmụmụ na Japan. Education Abroad Magazine
Students (ihe ruru.) : 17000
Echefukwala discuss University of Tsukuba
The University of Tsukuba Aims igosi free mgbanwe na nso mmekọrịta na ma isi na etinyere na sayensị na izi na ime nnyocha òtù na agụmakwụkwọ obodo ke Japan na esenidụt. Mgbe na-emepe emepe a mmekọrịta, anyị bu n'obi na-achụso agụmakwụkwọ na nnyocha ịzụlite ikom na ndị inyom na ihe ọgụgụ isi na ọgaranya mmadụ àgwà.
The University of Tsukuba-agbalịsi ike na-eme ka ọganihu nke sayensị na omenala. N'oge gara aga,, Japanese mahadum elekọta ịnọgide cloistered ha onwe ha na warara, specialized ubi, -eke polarization, ọnọdụ na-achọghị na muta na nnyocha na nkewapụ n'ebe ha obodo.
The University of Tsukuba kpebiri iji ọrụ dị ka a mahadum nke bụ na-emeghe ka ihe niile n'ime ma n'èzí nke Japan. N'ebe a njedebe, mahadum mere ka ọ ya ihe mgbaru ọsọ nwee nzukọ mma suiting ọrụ na ochichi na a echiche ọhụrụ banyere agụmakwụkwọ na nnyocha ukwuu mba na uma, ọgaranya di iche iche na mgbanwe na ike nke na-emeso sensitively na mgbanwe aa na dịkọrọ ndụ otu.
Na-aghọta nke a, ọ nyekwara ya mkpara na nhazi ọchịchị ka ike dị mkpa na-ebu ndị a.
The University of Tsukuba Aims na-na-emeghe mahadum na akụkụ nile na anyị bụ ndị a frontrunner n'ime mahadum mgbanwe na Japan. Anyị ụkpụrụ bụ isi bụ ike a na-agbanwe muta na nnyocha Ọdịdị nakwa dị ka a mahadum usoro na-izute mkpa nke ọgbọ ọzọ. Anyị nwewa abụ a keukwu mahadum, continuously nzute ịma aka ndị ọhụrụ na-emepe emepe ọhụrụ ebe. Ihe bụ isi ozi nke a mahadum bụ inye gburugburu ebe na-enye ohere eme n'ọdịnihu isi na-aghọta ha ka nwere ike na zuru. The University of Tsukuba na-enye ụmụ akwụkwọ ohere ịmụta iche na nkà site akwụkwọ na-kụziri site na ọnwụ ihu nnyocha. N'ebe a njedebe, anyị na-eso ihe mgbaru ọsọ.
1. Nzube anyị ifịk ifịk mụbaa interdisciplinary na integrative-abịaru nso ka agụmakwụkwọ nnyocha, n'ihu specialized nka na-emepụta na-akwanyere ùgwù research.
2. Nzube anyị nye gburugburu ebe na-enye ohere eme n'ọdịnihu isi na-aghọta ha ka nwere ike na zuru na-enye ha ohere ịmụta iche na nkà Mmụta na-kụziri site na ọnwụ ihu nnyocha.
3. Dị ka isi ihe Tsukuba Science City na ya ịta nke nnyocha sayensị institutes, nzube anyị akwalite mmekota n'etiti ụlọ ọrụ, academia na ọchịchị, ma na-eme ka mmadụ mgbe ọ nọgide na-ewusi anyị muta na nnyocha ikike.
4. Nkwalite nke isi na etinyere researches na nkà mmụta sayensị na-elekọta mmadụ ụkpụrụ, na researches inye onyinye iji nketa nke sayensị na omenala ndị ọzọ ọgbọ
5. Anyị mahadum nwere njikọ na mba na mpaghara n'ụwa nile na nzube anyị ghọọ a mahadum na elu mba aha na mmetụta site ifịk ifịk na-akwalite ụwa-klas muta na nnyocha omume na collaborative na mmekọrịta.
6. Anyị butere ụzọ ná mahadum mgbanwe site collaborative ọrụ n'etiti ndị ọrụ na ngalaba òtù na valuing ha pụọ ​​iche na ikike.
School of Art na Kere
na October 2002, the University of Tsukuba merged with the University of Library and Information Science. The School of Library and Information Science and the Graduate School of Library and Information – Media Studies were established.
Ị chọrọ discuss University of Tsukuba ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
photos: University of Tsukuba ukara Facebook